अशोक दर्जीको आँखाभरी आशु ? आफ्नै बास्तविक जीवन कथामा गीत गाउंदैछन् - Nepali Sandes
अशोक दर्जीको आँखाभरी आशु ? आफ्नै बास्तविक जीवन कथामा गीत गाउंदैछन्
झापा दमकका अशोक दर्जी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेका छन् । आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिरहेको भिडियो मार्फत उनी एकाएक चर्चामा आएका हुन् । दर्जीको अहिले युट्युवमा भाईरल नै बनेका छन् । काठमाडौँ आएर एउटा गीत रेकड गर्ने बित्तिकै उनी दर्जन भन्दा बढी युट्युव ट्रेडिङमा आएका छन् । दर्जीले गीत रेकड गर्दाको भिडियो र उनका अन्तर्वता गरी जम्मा १३ वटा युट्युवको ट्रेडिङमा आएको छ ।
निम्न वर्ग परिवारमा जन्मिएका दर्जीमा सानो उमेर मै निकै अदभूत गायन क्षमता भएको छ । जसले गर्दा छोटो समयमा नै उनी चर्चामा रहेका छन् । पढ्न रूचि देखाएका दर्जी आर्थिक अवस्था कम्जोर भएकै कारण पढ्न नपाएका हुन् । अहिले दर्जीलाई उर्लाबारीमा रहेको बेथेल एजुकेशन एकेडेमीले १० कक्षासम्म निःशुल्क पढ्ने र बस्ने व्यवस्था मिलाई दिएका छन् । हाल उनी स्कूल पनि जान थालिसकेका छन् ।
Mon-Apr-2018, 01:59 am मा प्रकाशित, 42 जनाले हेर्नुभयो
आश्माको ‘डामे तु कोसिता’ डान्स विश्वव्यापी लोकप्रिय, ३ हप्तामै एक करोड भ्यूज
पेटको बोसो तथा मोटोपन सर्लक्कै घटाउन चाहानुहुन्छ भने यो हो नयाँ तरीका !